UMhlongo akayizwa eyokuphanyeka amagilavu emgibeni
UNKULULEKO "Bulldog" Mhlongo nophromotha wakhe uLebo Mahoko usazimisele ngokulwa yize esanda kuphucwa ibhande le-SA Middleweight Isithombe: SITHUNYELWE
Zakhele Xaba | May 6, 2022
UMhlongo (40) waKwaZulu-Natal, uhlwithwe ibhande le-SA Middleweight nguJohn "Section 29" Bopape wase-Alexandra, eGauteng, obekade ephose inselelo ngempelasonto edlule. Le mpi ibikade ingenye yezihlelwe yiDream Team Promotions kaLebo Mahoko waseFree State.
Bekungokokuqala uMhlongo evikela ibhande le-SA Middleweight aliwine ngo-2019, ehlula uWalter "Black Mamba" Dlamini. Ngaphambi kokwenyukela esigabeni se-Middleweight, uMhlongo uphathe ibhande le-SA Super Welterweight iminyaka eyisikhombisa.
Ngenxa yokuhamba kweminyaka yobudala kaMhlongo, bekunenkolelo yokuthi uzowaphanyeka emgibeni amagilavu emuva kokuphucwa ibhande lakhe.
"Ngizizwa ngisakulungele ukuqhubeka nesibhakela. Ngizoyeka uma sengizwa kungasavumi. Okwamanje ngilinde ukuxoxa noLebo Mahoko, sibone ukuthi kuzokwenzekani. Angikasitholi isikhathi sokukhuluma naye okwamanje ngoba umatasa. Kodwa isifiso sami wukubuyisa ibhande lami le-Middleweight. Emuva kwalokho, ngifuna ukunyukela kwesinye isisindo. Mhlawumbe sengingasiyeka ke isibhakela emuva kwalokho. Kodwa kufanele libuye ibhande lami," kusho uMhlongo.
Bekungokwesibili uMhlongo elwa noBopape. Empini yokuqala eyagcina sekuba ngeyemizuliswano engu-10 ekubeni kwakuhlelwe ukuthi kuzoba ngeyesicoco, uMhlongo wakhala ngaphansi ngamaphuzu eThekwini.
Emuva kwempi yangempelasonto edlule, kukhona abathandi besibhakela abakhale ngokuthi bekungathi akuyena uMhlongo abebekade bembuka eringini.
"Bekungemina obekade elwa. Angikwazi ukuyichaza le nto. Kodwa uma ulwazi udaba lwezinsizwa uzokuqonda engikushoyo. Izinyawo zami nemilenze bekungavumi ngihambe eringini. Izingalo zami bezixega, zingaphakami uma ngigadla. Ngibonile ukuthi uyinsizwa (uBopape).
“Singasho ukuthi ungowaselokishini kodwa ukwenzile lokhu akwenzile ukuze ngingabi yimina eringini. Nasempini yokuqala ngayizwa le nto. Abantu engisondelene nabo bayasho uyinsizwa lo muntu ebengilwa naye. Uma sesiphinda naye kuzofanele nami ngisukume ngizivikele," kusho uMhlongo.